HIM | Health in Myanmar » 2015 » July
I was disappointed with this Mosaic e-magazine article, funded by the Wellcome Trust. I can almost hear Colonel Blimp opine that “Burma” is “one of Asia’s last bastions of sleepy colonial charm” or say “It’s in Myanmar’s borderlands that some of the greatest threats to global health lurk.” And Philippe Guérin, director of the UK-based […]
No mention of harm reduction
It is remarkable that an entire article can be written about HIV and injecting drug use in Myanmar without once mentioning the effective response to the HIV epidemic among people who inject drugs or writing the words ‘harm reduction’. The “nine out of ten drug users are positive for HIV” myth has been around for […]
Betel causes cancer
Yes, betel causes cancer. With or without tobacco. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042759 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113385 Have any control measures ever been undertaken in Myanmar? Jamie ++++++++++++++++++ Alarm sounded over Myanmar’s betel habit AFP 27 Jul 2015 Plying his trade in the seemingly eternal gridlock of Myanmar’s now booming commercial hub, he is more than used to spending long days on […]
Malaria experts know. Malaria goes up, malaria goes down. Treatment increases, treatment decreases. Giving credit toaprogramme foradecrease in ‘cases’ is risky. Nothing concrete about HIV in this article. Or the programme. Jamie ++++++++++++++++++ Thailand-Myanmar cooperation successfully halves Malaria cases Thai government news service Date : 24 กรกฎาคม 2558 CHIANG RAI, 24 […]
STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများ အခြေခံ (၂)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar2 comments | Tags: HIV, STD, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လိင်ဆက်ဆံရာ အသုံးပြုတဲ့နေရာမှန်သမျှမှာ ရောဂါရတယ်။ လိင်အင်္ဂါ၊ ပါးစပ်၊ စအို။ နောက်ပြီး မအေကနေကလေး။ မူးယစ်ဆေး သွေးပြန်ကြော ထိုးနည်းတွေကနေလဲ ကူးနိုင်တယ်။ လိင်အင်္ဂါတွေမှာသာ မဟုတ်ပါ တခြားနေရာတွေမှာပါ ရောဂါ ရတတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်တာတွေက ပိုဆိုးတယ်။ တကိုယ်လုံးကို ပြန့်တဲ့အဆင့်လို့ ခေါ်တာတွေက အသည်းရောင် (ဘီ) ပိုး၊ လိင်လမ်းရေယုံနဲ့ HIV တွေ ဖြစ်တယ်။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ကလေး, ကွန်ဒုံး, အမျိုးသမီး, ဆေးဝါး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆေးစသောက်ဘူးသူတွေ တလ၊ နှစ်လမှာ ရာသီရက် မမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ရင်သားတင်း-နာ၊ လိင်စိတ်နည်း၊ ခေါင်းမူး၊ ရုတ်ရက် ကိုယ်တခြမ်းထုံ၊ ရင်ပတ်နာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ခြေထောက်ရောင်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဆီးဝါ၊ စိတ်ကျတာတွေလည်း တချို့မှာဖြစ်တယ်။ ရှားရှား ပါးပါး ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်၊ အသဲကင်ဆာ၊ သည်းခြေအိတ်ကျောက်တွေ။
I guess Agnes
I guess Agnes will not be in NaypyiTaw this week for the health meeting. Webinar, 29 July: Medical Research & Capacity Bldg for Dev't – Rwanda @agnesbinagwaho @Fogarty_NIH pic.twitter.com/X6iryjPc1s — Health SystemsGlobal (@H_S_Global) July 23, 2015 Jamie
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: ကလေး, နည်းလမ်း, အမျိုးသမီး, ဧရာဝတီ
ဘယ်အချိန်မှာ သုတ် ပိုးနဲ့ မမျိုးဥ တွေ့ဆုံပြီး သန္ဓေတည်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာက မသိနိုင်တဲ့ အတွက် ၁၅ မိနစ် ကနေ မိနစ် ၂၀ လောက်အထိ ဆက်ပြီး လဲလျောင်းနေသင့် ပါတယ်။ နောက်ထပ် အရေးကြီးတာ တခုကတော့ ကလေးယူဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် မမျိုးဥ ထွက်လာနိုင်တဲ့ အချိန်ကို မှန်းဆနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာပြီး နောက် ၁၄ ရက်ကြာရင် မျိုးဥ စပြီးဆင်းပါ တယ်။ အဲဒီအချိန်ဟာ သန္ဓေတည်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ် မျိုးရနိုင်ပါတယ်။
Swedish model doesn't work
The idea of punishing men instead of female sex workers is attractive to people who want to do something that doesn’t target women. The problem is that it doesn’t work. Sweden has tried it. Sex work and female sex worker safety did not decrease. Caning is barbaric. BTW, decriminalisation works. Jamie ++++++++++++++++++ Prostitutes’ customers could […]
3MDG Fund donating to the World Bank?
Forgive my confusion, but it appears that the Three Millennium Development Goal Fund is giving money to the World Bank to implementatraining course. Is the World Bank as short of money as the 3MDG Fund is? Jamie ++++++++++++++++++ Health Systems Strengthening 3MDG invests in strengthening civil society’s technical capacity in health financing June […]
ပြည့်တန်ဆာများနှင့် လိင်ဆက်ဆံသူကို အရေးယူရန် လွှတ်တော်တင်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: SW, မဇ္ဈိမ, အခွင့်အရေး
ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်များက သဘောတူ လိုက်သည့်အတွက် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ဆွေးနွေးလိုသည့် အမတ်များအနေဖြင့် ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထားပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသို့ အမည်စာရင်းပေးကြရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က ကြေငြာထားသည်။